ကုလားတန်စီမံကိန်းပါ ဒေသခံများ အကျိုးခံစားခွင့်ကို ပွင့်လင်းမြင်သာစွာ ချပြရန်လိုအပ်နေကြောင်း ရခိုင်မြစ်ချောင်းများကွန်ယက်ဆို – Burmese
You are here: Home / Blog / သတင်းများ / ကုလားတန်စီမံကိန်းပါ ဒေသခံများ အကျိုးခံစားခွင့်ကို ပွင့်လင်းမြင်သာစွာ ချပြရန်လိုအပ်နေက...
ကုလားတန်စီမံကိန်းပါ ဒေသခံများ အကျိုးခံစားခွင့်ကို ပွင့်လင်းမြင်သာစွာ ချပြရန်လိုအပ်နေကြောင်း ရခိုင်မြစ်ချောင်းများကွန်ယက်ဆို
သီဟ — မြန်မာနှင့်အိန္ဒိယ နှစ်နိုင်ငံစာချုပ် ချုပ်ဆိုကာ ရခိုင်ပြည်နယ်တွင် ဆောင်ရွက်နေသည့် ကုလားတန်ဘက်စုံသုံး သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးစီမံကိန်း မစတင်မီ စီမံကိန်းနှင့်သက်ဆိုင်သည့် ဒေသများတွင် နေထိုင်သူများ မည်သည့် အကျိုးခံစားခွင့်များ ရနိုင်သည်ကို ပွင့်လင်းမြင်သာစွာ ချပြရန်လိုအပ်နေကြောင်း ရခိုင်မြစ်ချောင်းများကွန်ယက်၏ Managing Director ကိုတိန်ဦးက ပြောသည်။
စီမံကိန်းတစ်ခုလုံးနှင့်သက်ဆိုင်သည့် ပြည်သူလူထုအကျိုးခံစားခွင့်၊ သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိခိုက်မှုဆိုင်ရာ ဆန်းစစ်ချက်(EIA)နှင့် လူမှုဘဝထိခိုက်မှုဆိုင်ရာဆန်းစစ်ချက်(SIA)များကို လူထုအားချပြရန် လိုအပ်နေခြင်း ဖြစ်ကြောင်း ၎င်းကဆိုသည်။
ဆက်လက်ပြီး ကိုတိန်ဦးက လက်ရှိတွင် စီမံကိန်းဆိုင်ရာ အချက်အလက်အချို့ကိုသာ ချပြမှုရှိသော်လည်း EIA/SIA ဆိုင်ရာအချက်အလက်များနှင့် စီမံကိန်း၏ရည်ရွယ်ချက်၊ စီမံကိန်းမှ ဒေသခံများရရှိမည့် အကျိုး ကျေးဇူးများ၊ စီမံကိန်းမှ ရခိုင်ပြည်နယ်အတွက် မည်မျှအကျိုးကျေးဇူးရရှိမည် စသည်တို့ကို ရှင်းလင်းစွာ မသိရှိရသေးဟု ဆိုသည်။
“အခုစီမံကိန်းလုပ်ရင် ဘာတွေရလာမယ်။ ရခိုင်ကပြည်သူတွေအတွက် အကျိုးအမြတ်ရဲ့ဘယ်လောက်ကို သုံးမယ်။ သင်္ဘောတွေသွားလာလို့ ပတ်ဝန်းကျင်ထိခိုက်မှုတွေရှိလာရင် ကာကွယ်ဖို့အတွက် ဘာတွေ ပြင်ဆင်ထားတယ်ဆိုတာလည်း ပြည်သူကို ဘာမှချပြတာမရှိသေးဘူး။ ဖွင့်ပွဲလာလုပ်တယ်။ ပြီးတော့ ရခိုင်ပြည်နယ်မှာ အိန္ဒိယဆိပ်ကမ်းဆိုပြီး နာမည်ဖြစ်သွားတယ်” ဟု ၎င်းကပြောသည်။
လက်ရှိတွင် ဆိပ်ကမ်းတည်ဆောက်ပြီးစီးသွားသည်အထိ ဒေသခံများ၏အသံများ၊ စီမံကိန်းဧရိယာ တလျှောက်ရှိ ဌာနေတိုင်းရင်းသားများ၏ ရပိုင်ခွင့်များကို ထည့်သွင်းစဉ်းစားခဲ့ခြင်းမရှိဘဲ စီမံကိန်းပြီးမြောက် ရေးကိုသာ ဦးတည်ဆောင်ရွက်နေသည့် အနေအထားမျိုးဖြစ်နေကြောင်းလည်း ကိုတိန်ဦးက စွပ်စွဲပြောဆိုသည်။
ထို့အပြင် စစ်တွေမြို့တွင် ဆိပ်ကမ်းတည်ဆောက်ခဲ့စဉ်က လိုအပ်သည့်သဲများကို ကုလားတန်မြစ်ဝမှ သွားရောက်စုပ်ယူခဲ့သည့်အတွက် အဆိုပါတစ်ဖက်ကမ်းရှိ သဲခုံကျေးရွာတွင် ရေတိုက်စားကာ ကမ်းပြိုသည့် အတွက် နေအိမ်များရေအောက်ရောက်သွားခဲ့ရသည့် ဖြစ်စဉ်များလည်းရှိခဲ့ကြောင်း ရခိုင်မြစ်ချောင်းများ ကွန်ယက်က ထောက်ပြသည်။
စစ်တွေမြို့နှင့် ကုလားတန်မြစ်ခြားထားသည့် ပေါက်တောမြို့နယ် သဲခုံကျေးရွာတွင် ပြီးခဲ့သည့် ၂၀၁၀ ခုနှစ်မှ စတင်ကာ ကမ်းပါးပြိုကျမှုများဖြစ်ပွားခဲ့ကာ လက်ရှိအချိန်ထိ မည်သည့်ဌာနကမှ လာရောက်ကူညီပေးခြင်း မရှိသေးကြောင်းနှင့် ကူညီဆောင်ရွက်ပေးစေလိုကြောင်း သဲခုံကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူး ဦးသန်းလှိုင်က ပြောသည်။
“စစ်တွေမှာ ဆိပ်ကမ်းလုပ်နေတုန်းက သင်္ဘောကြီးတွေနဲ့ သဲတွေလာစုပ်ကြတယ်။ အဲဒီနှစ် မိုးတွင်းကစပြီး ကမ်းက စပြိုလာတာ အခုဆိုရင် ရွာရဲ့သုံးပုံတစ်ပုံလောက် ကုန်သွားပြီ။ ဒီနှစ်မိုးတွင်းလည်း ဆက်ပြီးပြိုမယ့် အနေထားမှာ ရှိနေသေးတယ်” ဟု ၎င်းကဆိုသည်။
ဒေသတစ်ခုတွင် စီမံကိန်းလုပ်ဆောင်မည်ဆိုပါက အဆိုပါစီမံကိန်း၏ EIA/SIA ဆိုင်ရာအချက်များကို အဆိုပါ စီမံကိန်းဧရိယာရှိ ပြည်သူများသို့ ပွင့်လင်းမြင်သာစွာရှင်းပြရန်လိုအပ်ပြီး ထိုသို့ချပြမှုမရှိပါက အကယ်၍ ထိခိုက်မှုဆိုးကျိုး တစ်စုံတစ်ရာဖြစ်ပေါ်လာပါက ဒေသခံများတွင် များစွာထိခိုက်မှုများဖြစ်ပွားနိုင်ကြောင်း အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာတောရိုင်းတိရိစ္ဆာန်နှင့် သဘာဝအပင်အဖွဲ့(FFI)မှ ရေချိုနှင့်အဏ္ဏဝါ ရေပြင်ထိန်းသိမ်းရေး အစီအစဉ်မန်နေဂျာ ဦးဇော်လွန်းကပြောသည်။
“လုပ်ငန်းတစ်ခုလုပ်ရင် ရုတ်တရက် ဒေသမှာအကြောင်းတစ်ခုခုထိခိုက်ရင် ဒေသခံတွေက မကျေမနပ်ဖြစ်မှာ ပဲလေ၊ ဒီတော့မဖြစ်အောင် ကြိုပြီးရှင်းပြရတယ်။ ဒီဒေသမှာတော့ ဒါကိုလုပ်မယ်။ တစ်နှစ်၊ နှစ်နှစ်တော့ ဒီလို ဖြစ်မယ်၊ သို့သော်အဲဒီကာလအတွင်းမှာ ဒေသခံတွေကို ဘယ်လိုကုစားပေးမယ် ဘယ်လိုတုန့်ပြန်ပေးမယ်။ နောက်ရေရှည်မှာ အဆင်ပြေအောင်ဘယ်လိုလုပ်ပေးမယ်ဆိုပြီး သူတို့ရဲ့ Plan မှာ ပါတာတွေကို ရှင်းပြဖို့လိုတယ်” ဟု ၎င်းကဆိုသည်။
ကုလားတန်စီမံကိန်းမစတင်မီ စီမံကိန်းနှင့်သက်ဆိုင်သည့် ကောင်းကျိုးဆိုးကျိုးများကို သေချာလေ့လာကာ ပြည်သူများကို စနစ်တကျရှင်းပြခြင်းများပြုလုပ်သင့်ကြောင်း ဦးဇော်လွန်းက ထပ်လောင်းပြောကြားခဲ့သည်။
“ကုလားတန်စီမံကိန်းက ဒေသဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် ဘယ်လောက်အကျိုးပြုတယ်။ ဘာတွေ အကျိုးရမယ် ဆိုတာ ကိုလည်း သေသေချာချာရှင်းပြဖို့လိုမယ်။ ဘယ်လောက်ပဲ ကောင်းအောင်ပဲလုပ်လုပ် သေသေချာချာ ရှင်းပြဖို့ လိုတယ်။ မဟုတ်ရင် နောက်ပိုင်းမှာ မပွင့်လင်းတဲ့ပြဿနာတွေ ဖြစ်သွားနိုင်တယ်” ဟု သူကဆိုသည်။
စီမံကိန်းဆိုင်ရာ အချက်အလက်များနှင့်ပတ်သက်ပြီး ရခိုင်ပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့ ဘဏ္ဍာ၊ အခွန်၊ စီမံကိန်းနှင့် စီးပွားရေးဝန်ကြီး ဦးကျော်အေးသိန်းအား ဆက်သွယ်မေးမြန်းရာ ပြည်ထောင်စုအဆင့်ဆက်သွယ်ရေးနှင့် ပို့ဆောင်ရေးဝန်ကြီးဌာန လက်အောက်ရှိ မြန်မာ့ဆိပ်ကမ်းအာဏာပိုင်အဖွဲ့ကိုသာမေးမြန်းရန် ပြောသည်။
လက်ရှိတွင် စစ်တွေနှင့် ပလက်ဝတို့၌ ရေကြောင်းပို့ဆောင်ရေးဆိပ်ကမ်း တည်ဆောက်ပြီးပြီဖြစ်ကာ အဆိုပါ စီမံကိန်းကို ၂၀၂၀ ပြည့်နှစ်တွင် အပြီးသတ်တည်ဆောက်ရန် သဘောတူညီမှု(MOU)ထိုးထားခဲ့သော်လည်း တပ်မတော်နှင့် ရက္ခိုင့်တပ်တော်(AA)တို့၏ တိုက်ပွဲများကြောင့် လက်ရှိတွင် ခေတ္တရပ်ဆိုင်းထားရကြောင်း ချင်းပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့ စည်ပင်သာယာရေးဝန်ကြီး ဦးစိုးထက်ကဆိုသည်။
“တိုက်ပွဲတွေကြောင့် ရေကြောင်းပိုင်းမှာလုပ်နေတဲ့ အပိုင်းကို ခေတ္တရပ်ထားရသေးတယ်။ နောက်ပြီး လမ်းဖောက် လုပ်မယ့်အပိုင်းကိုကျတော့ လက်ရှိကိုဗစ်ရယ်။ နယ်မြေမအေးချမ်းသေးတာတွေရယ်ကြောင့် ခေတ္တရပ်ဆိုင်းထားရ ပါသေးတယ်” ဟု သူကဆိုသည်။
အဆိုပါ စီမံကိန်းပြီးမြောက်သွားမည်ဆိုပါက ချင်းပြည်နယ်၊ ပလက်ဝမြို့နယ်၊ စက်ပစ်ပြင်ကျေးရွာအထိ ကုန်းလမ်းအတိုင်း ကုန်သွယ်နိုင်မည်ဖြစ်ကာ ထိုမှတစ်ဆင့် ကုလားတန်မြစ်ကြောင်းအတိုင်း စစ်တွေမြို့သို့ ကုန်သွယ်နိုင်မည်ဖြစ်ကြောင်း ဦးစိုးထက်ကဆိုသည်။
အိန္ဒိယနိုင်ငံ ကာလကတ္တားမြို့မှတဆင့် စစ်တွေဆိပ်ကမ်း-ပလက်ဝဆိပ်ကမ်းတို့မှ အိန္ဒိယအရှေ့မြောက်ရှိ မီဇိုရမ်ပြည်နယ်သို့ ချိတ်ဆက်နိုင်ရန် အိန္ဒိယနိုင်ငံ၏အရှေ့မျှော်ဝါဒအရ ဆောင်ရွက်သည့် စီမံကိန်းဖြစ်ကာ ၂၀၀၈ ခုနှစ်တွင် နှစ်နိုင်ငံသဘောတူစာချုပ် ချုပ်ဆိုခဲ့သည်။
အဆိုပါစီမံကိန်းတွင် ကုန်းလမ်းနှင့်ရေလမ်းဟူ၍ နှစ်မျိုးပါဝင်ကာ ရေလမ်းမှာ စစ်တွေမှပလက်ဝအထိဖြစ်ပြီး ပလက်ဝမှ အိန္ဒိယနိုင်ငံ မီဇိုရမ်ပြည်နယ်အထိ ကုန်လမ်းဖြင့်ဆက်သွယ်မည်ဖြစ်ပြီး အိန္ဒိယနိုင်ငံမှ စီမံကိန်းတွင် ကန်ဒေါ်လာ ၄၈၄ သန်း ရင်းနှီးမြှုပ်နှံထားသည်။
မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ အိန္ဒိယသံအမတ်ကြီး H.E. Shri Saurabh Kumar က ရခိုင်နှင့် ချင်းပြည်နယ်တို့တွင် တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားမှုများရှိနေသဖြင့် ကုလားတန်မြစ်ကြောင်းဘက်စုံသုံးစီမံကိန်း၏ ပလက်ဝမှ အိန္ဒိယနိုင်ငံ၊ မီဇိုရမ်ပြည်နယ်သို့ ကားလမ်းဖောက်လုပ်ရာတွင် လုံခြုံရေးအခြေအနေကြောင့် ကြန့်ကြာမှုများရှိနေသည်ဟု ယခုနှစ် ဇန်နဝါရီလအတွင်းက ပြောဆိုခဲ့သည်။
“ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် ဒီလမ်းသာအကောင်အထည်ဖော်သွားရင် ရခိုင်ပြည်နယ်မှာရှိတဲ့ ပြည်သူလူထုတွေအတွက် အကျိုးခံစားခွင့်ရှိမှာကို မျှော်လင့်လို့ပါ။ အဲဒါကြောင့် ကျနော်တို့ဒီလမ်းကို အခက်အခဲရှိပေမယ့်လည်း အိန္ဒိယနိုင်ငံအစိုးရအနေနဲ့ကတော့ လမ်းကိုအမြန်ဆုံးနဲ့ အကောင်အထည်ဖော်သွားမှာ ဖြစ်ပါတယ်” ဟု H.E. Shri Saurabh Kumar ကပြောသည်။
လက်ရှိ ဆောင်ရွက်နေသောစီမံကိန်းမှာ ရခိုင်ပြည်သူများ အကျိုးရှိမည့်ကိစ္စဖြစ်သဖြင့် မည်သည့်ပါတီ၊ မည်သည့် ဌာနဆိုင်ရာမဆို ဝိုင်းဝန်းကူညီပူးပေါင်းပေါင်းဆောင်ရွက်ရန် မျှော်လင့်မိကြောင်းလည်း ၎င်းကဆိုသည်။
ယင်းသို့ ဖောက်လုပ်နေသည့်လမ်းပြီးစီးသွားပါက စစ်တွေဆိပ်ကမ်းမှ အိန္ဒိယနိုင်ငံ မီဇိုရမ်ပြည်နယ်သို့ ဆက်သွယ်သွားလာနိုင်မည်ဖြစ်ပြီး ရခိုင်ပြည်နယ်နှင့် အိန္ဒိယနိုင်ငံတို့၏ ကုန်သွယ်ရေးနှင့် စီးပွားရေးလုပ်ငန်း များကို ပိုမိုဆောင်ရွက်လာနိုင်မည်ဖြစ်ကြောင်းလည်း အိန္ဒိယအစိုးရဘက်က ပြောဆိုထားသည်။
ပြီးခဲ့သည့် နိုဝင်ဘာလ ၃၀ ရက်နေ့က ရခိုင်ပြည်နယ်လွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌ ဦးစံကျော်လှထံသို့ စစ်တွေမြို့အခြေစိုက် အိန္ဒိယနိုင်ငံကောင်စစ်ဝန်ရုံးမှ ကောင်စစ်ဝန်ချုပ် Dr. Gautam Kumar Pandey နှင့်အဖွဲ့ လာရောက်တွေ့ဆုံ ခဲ့ပြီး စစ်ဘေးရှောင်များ နေရပ်ပြန်နေထိုင်နိုင်ရန် အကူအညီပေးရေးကိစ္စနှင့် ကုလားတန်စီမံကိန်း အမြန်ဆုံး လည်ပတ်ရေးအတွက် ရခိုင်ပြည်နယ်လွှတ်တော်က အကူအညီပေးရေးတို့ကို ဆွေးနွေးခဲ့သည်။
December 7, 2020 /by ndb14
https://nd-burma.org/mm/wp-content/uploads/2020/12/palawa.jpg 430 1500 ndb14 http://nd-burma.org/mm/wp-content/uploads/2020/01/ndbLogo150.png ndb142020-12-07 01:49:222020-12-10 01:53:09ကုလားတန်စီမံကိန်းပါ ဒေသခံများ အကျိုးခံစားခွင့်ကို ပွင့်လင်းမြင်သာစွာ ချပြရန်လိုအပ်နေကြောင်း ရခိုင်မြစ်ချောင်းများကွန်ယက်ဆို
တရားမျှတမှုစာစောင် (နိုဝင်ဘာလ၊... (၇၂) နှစ်မြောက် နိုင်ငံတကာလူ့အခွင့်အရေးနေ့အတွက်...